अनाबश्यक पेटको बोसो हटाउने सरल घरेलु उपाय- | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य अनाबश्यक पेटको बोसो हटाउने सरल घरेलु उपाय-
अनाबश्यक पेटको बोसो हटाउने सरल घरेलु उपाय-
२०७४, १९ असार सोमबार २१:०७
पेटको बोसो हटाउने सरल घरेलु उपाय-
१. कागती पानीबाट गर्नुहोस् दिनको सुरुवात
दिनको सुरुवात कागती पानीबाट गर्नुहोस् । पेटमा जम्मा भएको अतिरिक्त बोसो कम गर्न यो घरेलु उपाय प्रभावकारी हुन्छ । तातो पानीमा कागतीको थोरै रस र नुन मिसाएर हरेक दिन बिहान सेवन गर्नुहोस् । यसबाट तपाईंको मेटाबोलिजम दुरुस्त रहन्छ र तौल कम गर्नमा पनि मद्दत मिल्छ ।
२. खैरो चामलको भात खानुहोस्
यदि तपाईं भात खानमा सोखिन हुनुहुन्छ भने सेतो चामलबाट टाढा रहनुहोस्, त्यसको स्थानमा खैरो चामलको भात खानुहोस् । यसका अलावा आफ्नो खानामा ब्राउन ब्रेड, ओट्सजस्ता खाद्य पदार्थ सामेल गर्नुहोस् । (खैरो चामलको भात भने नेपालको सन्दर्भमा त्यति सम्भव नहोला)
३. गुलियोबाट टाढा रहनुहोस्
४. पानी धेरै पिउनुहोस्
५. काँचो लसुन खानुहोस्
६. मांसाहारबाट टाढै रहनुहोस्
७. धेरै सागसब्जी खानुहोस्
८. खाना पकाउने तरिका परिवर्तन गर्नुहोस्
९. बदामको प्रयोग गर्नुहोस्
Previous articleदाँतको समस्याले ग्रसित नारच्याङका यूवालाई सहयोग
Next articleबालबालिकाले खाना नखाए के गर्ने ?